नयाँ मतदाता ५० देखि ६० प्रतिशत एमालेमा देखिएकाले निर्वाचन जित्छौँ- एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
समाजलाई समाजवादमा पुर्‍याउन चाहन्छौँ । जतिबेला सामाजिक न्यायसहितको समाज र समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ । समुन्नति र समृद्धि पनि सँगसँगै हुन्छ । यसका लागि एमाले ठूलो दल बन्नुपर्छ । तर, हामी पहिले सरकारमा छँदा आन्तरिक द्वन्द्व व्यस्थापन गर्न सकेनौं । त्यसकै कारणले अन्ततः संसद् विघटनको स्थिति निम्तियो । यद्यपि, के हो भने नयाँ जनादेशका लागि जनतामा जाने कुरा प्रतिगमन होइन । त्यसबेला त आन्तरिक द्वन्द्वले सरकार संकटमा पर्ने स्थिति थियो । त्यसलाई फेरि नकोट्याउँ । कति कोट्याउने क्या ? जहिल्यै कोट्याएर एमालेलाई प्रतिगामी भनिरहने ? संसद् पुनःस्थापना भइ सकेन र ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, वैशाख २० २०७९ १३:२३:२३